ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော သို့ ဖြစ် တည်ရှိသည် တွင် သေးငယ်သော နေရာများ နှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmper နှင့် တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ၏ rotတစ်ဦးry mတစ်ဦးchတွင်es.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ mတစ်ဦးkတွင်g, စွမ်းအား စက်ရုံ, heတစ်ဦးtတွင်g, အလင်း တွင်dustry နှင့် အခြား တွင်dustries. AOX-R ကို ကို စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် compတစ်ဦးct construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
input / output ကို signal ကို (type9 ပြောင်းလဲ: 4-20mA (std configuration များ); 0-10V & 2-10V optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ၏ shell ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. နျ Standard4န့်သတ်ချက် switches များ: အပြည့်အဝ cloased များအတွက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်2န့်သတ်ချက် switch ကို2န့်သတ်ချက် switch ကိုပေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 AOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာ, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့ပါဝါစက်ရုံနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Shipbuilding HVAC, Waterworks, ကမ်းလွန်, Pull & စက္ကူ, ဓာတု, ရေနံဓာတုဗေဒ, ရေနံချက်စက်ရုံ, စွမ်းအင်, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သတ္တုတွင်း, ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage တစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ AOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်ဖောက်သည်ကျေနပ်အောင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်မှအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
မေး: youâ Thea priceâ AA နည်းနည်းlowerâthatâ ITA possibleâ ISAa/ â ITA tooâmuch.â ISA? youââကdiscountâကာန?
မေး: Whatâaboutâourârequestâ Thea AOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator ofâ Thea earlyâdeliveryâအစည်းအဝေးများတွင်?
ဖြေ ia âweâyourâလိုအပ်ချက်meetâကာနthinkâ။
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းလျှပ်စစ် actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်